China Maufacturer yeHPMC yemazuva ese giredhi Mugadziri uye Mutengesi |Longou
Maufacturer weHPMC giredhi remazuva ese
1. HPMC giredhi yemazuva ese imhando ye-non-ionic cellulose ether, iyo inonyanya kugadzirwa neakasikwa chirimwa fiber kuburikidza neakatevedzana emakemikari processing.Ichena kana chena fibrous kana granular powder, inonyungudika mumvura uye zvimwe zvinonyungudutsa, kushanda kwehpmc kunosiyana. ine zvirevo zvakasiyana, HPMC inokwanisawo kukora, kusamira munyu, dota rakaderera, kugadzikana kwePH, nzvimbo inochengeta mvura, kugadzikana kwedimensional, yakanakisa firimu yekugadzira pfuma, uye yakakura enzyme kuramba, dispersibility uye adhesion etc.
2. Special thickening agent yemazuva ese kemikari giredhi, MODCELL 6508,upfu chena kana yero, Hunhuhwirira, husina kunaka uye husina chepfu.
1. HPMC giredhi zuva nezuvaimhando ye-non-ionic cellulose ether, iyo inonyanya kugadzirwa neakasikwa chirimwa fiber kuburikidza neakatevedzana emakemikari processing.Ichena kana chena fibrous kana granular poda, inonyungudika mumvura uye zvimwe zvinonyungudutsa, kuita kwehpmc kunosiyana neakasiyana maitiro, HPMC. zvakare inokwanisa kukora, kusamira munyu, dota rakaderera, kugadzikana kwePH, midziyo inochengeta mvura, kugadzikana kwedimensional, yakanakisa kugadzira firimu pfuma, uye yakakura enzyme kuramba, dispersibility uye adhesion nezvimwe ...
2. Specialthickening agent kwezuva nezuvakemikari giredhi, MODCELL 6508, hupfu chena kana yero, Hunhuhwirira, husina kunaka uye husina chepfu.
3. MODECELL 6503 ine maitiro ekusimudzwa kwakanaka, kusanganisa kufanana kwakanaka kunokora mhedzisiro uye nezvimwe ..., yakanaka zvakafanana neyakatengwa kunze kwenyika maererano nekuita, asi mutengo unowedzera kukwikwidza.Iine basa rekukora kana richishandiswa mukugezesa zvigadzirwa, rine zvimwe surfactant.Sechinhu chinokora chemvura yekuwachisa ndiro uye sanitizer yemaoko, hapana stratification, hapana kutetepa, hapana kuparara, hapana kunamatira.
4. Iyo inonyungudutsa inogona kugadziriswa mumvura inotonhora uye Organic compound, Kugadzira yakajeka, viscous solution.Iine basa repamusoro, kujeka kwepamusoro uye kugadzikana kwakasimba.
5. Mushonga wekukora unoshandiswa mumudziyo wekugezesa Dishwashing ne sanitizer yemaoko.Inoshandawo mune akawanda magadzirirwo apo mamwe makobvu akaoma kukora.Zvichakadaro, ine yakanaka-yekuchengeta mvura uye yakanaka yekugadzira firimu pfuma, Yakachengeteka uye isina chepfu kumuviri wemunhu, nyore ku biodegrade.
HPMC zuva nezuva giredhi 1
Zita Hydroxypropyl methyl cellulose
Chitarisiko Hupfu huchena hunoyerera zvakasununguka
Bulk density 19.0--38.0(g/cm3)
Hydroxypropyl content 4.0--12.0(%）
Gelling tembiricha 70--90(℃)
Hunyoro hwemukati ≤5(%）
PH kukosha 6.0--8.0
Viscosity (2% mhinduro) 180,000--230,000S(mPa.s, NDJ-1)
Viscosity (2% mhinduro) 60,000--70,000S(mPa.s, Brookfield)
➢Chiedza chakanaka chekufambisa
➢Good thickening effect
➢Kugadzikana kwakanaka kwechigadzirwa
Zvakapfuura: Fekitari inopa HPMC yekuvaka kushandiswa
Zvinotevera: Additives Hydroxyethyl cellulose yependi yematombo uye machira emvura
Hydroxyethyl Methyl Cellulose Eteri HEMC manufa...
Hydorypropyl methyl cellulose HPMC LK400 yakanakisa...
Cellulose Eta Hydroxyethyl methyl cellulose H...
Kuvandudza zvinonamira zvematairi ekuvaka ekuwedzera ...